Agaasimihii bangiga dhexe ee dalka Afghanistan oo iscasilay – SBC
Agaasimihii bangiga dhexe ee dalka Afghanistan oo iscasilay
Kabul:- Agaasimihii bangiga dhexe ee dalka Afghanistan ninka lagu magacaabo C/qaadir Fidrat ayaa xilkii iska casilay kadib markii laga diiday in uu baaritaan ku sameeyo lacag xadigeedu dhan yahay nus bilyan dollar oo la sheegay in la lunsaday ama aanan lagaranayn meesha ay martay.
Fidrat oo la hadlayey BBC-da laanteeda dibadaha la hadasho isagoo ku sugan Washington ayaa sheegay in uu aaminsan yahay in noloshiisa khatar ku jirto sababo la xiriira baaritaan fadeexad musuqmaasuq oo balaaran taasi oo keentay burburka bangiga Kabul ee gaarka loo leeyahay sanadkii la soo dhaafay.
Fidrat ayaa tibaaxay in uu aaminsan yahay in mas’uuliyiinta fadeexadan ay yihiin kuwo ay qaraabo yihiin iyo kuwo gacan saar la leh madaxweynaha dalka Afghanistan Xamiid Karazaay.
Arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli mas’uuliyiin katirsan xukuumadda Afghanistan ay sheegeen in C/qaadir Fidrat uu isaga ruuxiis uu kamid yahay kuwa kulugu leh arrinta burburka bangiga Kabul.
Sidoo kale Fidrat ayaa sheegay in qaar kamid ah xildhibaanada ugu cad cad barlamaanka Afghanistan ay kulugu leeyihiin fadeexada.
Warbixin uu soo saaray xafiiska la dagaalanka musuqmaasuqa Afghanistan bishii May ee ayaa lagu sheegay in Bangiga Kabul uu bixiyey amaah dhan 476 malyan oo dollar isagoo aanan helin dukumintiyada loo baahan yahay.
Dhacdadaas ayuu madaxweyne Karazaay u aaneeyey in ay keentay khibrad yarida afgaanistaaniyiin arrimaha la xiriira bangiyada islamarkaana wuxuu balan qaaday in uu furi doono baaritaan ciddii mas’uulka ka ahayd dhacdooyinkaas.
C/qaadir Fidrat ayaa ah in haysta iqaamad joogta ah dalka mareykanka taasi oo xaq u siinaysa in uusan ku soo laaban dalka Afghanistan.